March 2012 ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
By သန့်ဇင်ဌေး2:39 AMအထွေထွေ14 comments
By သန့်ဇင်ဌေး7:23 PMKnowledge and FAQ, laptop ၀ယ်ယူရာတွင် သိရမည့် အချက်များ, ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ17 comments
By သန့်ဇင်ဌေး7:09 AMKnowledge and FAQ, laptop ၀ယ်ယူရာတွင် သိရမည့် အချက်များ, ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ13 comments
By သန့်ဇင်ဌေ6း:39 PMHarddisk Repair and Maintain, Internet Tools18 comments
By နေမင်းမောင်12:34 AMအထွေထွေ20 comments
ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် .... နေမင်းမောင်
By နေမင်းမောင်3:28 AMအထွေထွေ35 comments
By နေမင်းမောင်11:56 PMPhoto and Image Tools20 comments
By နေမင်းမောင်11:25 PMInternet Download Manager11 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Internet Download Manager မှာ နောက်ဆုံး Update လေးဖြစ်တဲ့ Build7Beta Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ Build5ထပ်ထွက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း လေးနောက်ကျသွားပါတယ်။ IDM ကိုတော့ ကျွန်တော် Update ဖြစ်တိုင်းနောက်မကျအောင် တင်တင် ပေးသွားမှာပါ။ အခုလည်း IDM ကို Install လုပ်ရတာအဆင်မပြေသူများအတွက် ဒီလင့်ခ်လေး မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့5MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက် ပါဗျာ။
By နေမင်းမောင်11:23 PMOffice and Document Tools10 comments
By နေမင်းမောင်11:14 PMSystem Tools8 comments
By နေမင်းမောင်10:55 PMUninstaller Tools3 comments
By နေမင်းမောင်9:02 AMWindows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ6 comments
By နေမင်းမောင်9:02 AMအထွေထွေ14 comments
ကျွန်တော် အခု အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ ( ၁၃ ) ၊ အမှတ် ( ၁၁ ) လေး ထပ်ပြီးတော့ ရှယ် ပေးလိုက်ပါတယ် http://mmzone.co.nr/ မှာ အပါတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တိုင်း တင်ပေးနေပါတယ် .. အခုလို အင်တာနက် ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ ၀ါသနာရှင်များ အတွက် တကူတက Scan ဖတ်ပြီး တင်တင်ပေးနေတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ကျွန်တော့်လိုပဲ အပြင်မှာ ၀ယ်ဖတ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ သူများ အဆင်ပြေအောင် ပြန်ရှယ် ပေးလိုက်ပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူများကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
Windows7Home Basic နှင့် Starter အသုံးပြုသူများ အတွက်
By နေမင်းမောင်7:20 AMWindows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ9 comments
အရင်က မေးထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ Windows Home Basic တို့ Windows Starter တို့မှာ Ultimate တို့မှာပါတဲ့ Personalize မပါတဲ့ အတွက် ဘယ်လို အသုံးပြုလို့ ရမလည်း ဆိုပြီး မေးထားတာလေး ရှိပါတယ် .. ကျွန်တော် အခု အဲ့ဒီ အဆင်မပြေတဲ့ သူများအတွက် .. Personalization Panel v1.2.1 လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုပြီး Home Basic တို့ Starter တို့မှာ Ultimate တို့မှာ အသုံးပြုရသလို Personalize လေးကို ထည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. အသုံးပြုရတာလည်း မခက်ပါဘူး .. အခု ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်လေးကို မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ အင်စတော လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် Restart ချပေးလိုက်ပါ .. Windows ပြန်တက်လာ ပြီဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ Windows Home Basic ဒါမှမဟုတ် Starter တို့မှာ Personalize လေးနဲ့ Aero Feature လေးကို အသုံးပြုနိုင်သွားပြီ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ သုံးနေရာ ခွဲတင်ပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ မိမိတို့ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်6:41 AMAudio Tools9 comments
By နေမင်းမောင်6:22 AMPhoto and Image Tools3 comments
အခုကျွန်တော် .. Logo Maker လေးတစ်ခု ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. Logo Maker လေးတွေတော့ ခဏခဏ တင်ပေးဖြစ်ပါတယ် .. အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်လေးကတော့ Soting Logo Maker 3.3 ပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် လိုအပ်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် အောက်မှာ သုံးနေရာ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် .. မိမိတို့ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်6:16 AMInternet Download Manager6 comments
By နေမင်းမောင်2:38 AMWindows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ6 comments
By နေမင်းမောင်3:47 PMကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ8 comments
By နေမင်းမောင်3:47 PMAntivirus Softwares9 comments
စီဘောက်မှာ အကို တစ်ယောက် တောင်းထားလို့ DOWNLOAD IObit Malware Fighter Pro ဗားရှင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Pro Version လေးသုံးဖို့ အတွက် Serial Key လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြု ဖို့ပြီး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ ၀င်ရောက်လာမဲ့ spyware, adware, trojans, keyloggers, bots, worms, and hijackers တွေကို ကာကွယ် ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Pro Version လေး သုံးလို့ ရအောင် Key ဘယ်လို ထည့်ရမယ် ဆိုတာကို အောက်မှာ ပုံလေးနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
By နေမင်းမောင်4:50 AMအထွေထွေ5 comments
By နေမင်းမောင်4:50 AMSoftwares2 comments
အခု ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ Bluefish ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက Programmer တွေအတွက် Coding ပိုင်းလေးတွေ ရေးပြီးတော့ ပြင်ဆင်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ ၀ါသနာ အရ Coding လေးတွေ ရေးပြီး ကလိချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အထောက် အကူ ပြုမဲ့ ကောင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. PHP , HTML စတဲ့ Program Language တော်တော်များများကို လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. လိုအပ်လို့ ဆောင်ထား ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်4:20 AMThemes5 comments
By နေမင်းမောင်4:05 AMအထွေထွေ7 comments
ကျွန်တော် အခု အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ ( ၁၃ ) ၊ အမှတ် ( ၁၀ ) လေး ထပ်ပြီးတော့ ရှယ် ပေးလိုက်ပါတယ် http://mmzone.co.nr/ မှာ အပါတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တိုင်း တင်ပေးနေပါတယ် .. အခုလို အင်တာနက် ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ ၀ါသနာရှင်များ အတွက် တကူတက Scan ဖတ်ပြီး တင်တင်ပေးနေတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ကျွန်တော့်လိုပဲ အပြင်မှာ ၀ယ်ဖတ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ သူများ အဆင်ပြေအောင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ ကနေ ပြန်ရှယ် ပေးလိုက်ပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူများကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်3:41 AMDrivers for All2 comments
ကျွန်တော် Intel Chipset Software Installation Utility 9.3.0 တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုက Intel Prosessor အမျိုးအစားကိုသာ အများစု အသုံးပြုကြ ပါလ်ိမ့်မယ် .. AMD ထက်စာရင် Intel ကို မြန်မာလူမျိုးတွေ ပိုပြီးတော့ အသုံးများ ကြပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ စက်အသစ် ဆင်တဲ့ အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Windows XP ကို အသစ်တင်ပြီး သုံးတဲ့ အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ချို့ Driver တွေက Install လုပ်ထား ပေးမဲ့လည်း အလုပ်မလုပ် ကြပါဘူး .. အဲ့ဒီအခါမှာမျိုးမှာ ကျွန်တော် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Intel Chipset ကို မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ Install လုပ်ပေးလိုက်မှသာ Driver က အလုပ်လုပ်ပြီး အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် တစ်ခါ ကြုံဖူးပါတယ် .. ညီလေးတစ်ယောက် စက်အသစ် ဆင်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ Network Card က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး .. သက်ဆိုင်ရာ Network Card Driver ကို အင်စတော့ လုပ်ပေးပေမဲ့လည်း အဆင်မပြေပါဘူး .. ကျွန်တော် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Chipset လေးကို ရှာပြီး အင်စတော လုပ်ပေးလိုက်တော့မှပဲ Network Card ကို အဆင် ပြေပြေနဲ့ အသုံးပြု နိုင်သွားပါတယ် .. ဒါကြောင့် အမြဲတမ်း မလိုအပ်ဘူး ဆိုရင်တောင် အလိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် ဆောင်ထား ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်လော့ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်2:37 AMSoftwares5 comments
ကျွန်တော် အခု ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေ ၊ လုပ်ငန်း အသေးစား လေးတွေ မှာ အသုံး ပြုဖို့ အတွက် အထောက် အကူပေးနိုင်မဲ့ AceMoney လို့ခေါ်တဲ့ Account Software လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးမှာ home or even small-business accounting အတွက် လိုအပ်တဲ့ Feature လေးတွေ ပါဝင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်အောက်မှာ သူ့ရဲ့ Feature လေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးသုံးလို့ ရအောင် Key ဘယ်လို ထည့်ရမယ် ဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ ပုံလေးနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
By နေမင်းမောင်2:22 AMWindows Loaders21 comments
By နေမင်းမောင်5:06 AMအထွေထွေ37 comments
Peer Network ( or ) Work Group ချိတ်ဆက်ခြင်း ( E-Book )
By နေမင်းမောင်5:04 AMMyanmar E-Books6 comments
By နေမင်းမောင်4:42 AMPhoto and Image Tools12 comments
ကျွန်တော် အခု PhotoInstrument Version အသစ်လေး ထပ်ထွက် လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကိုတော့ Version ထွက်တိုင်း တင်ပေး ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ ဓာတ်ပုံတွေမှာ အစက်အပျေက်လေး တွေကအစ အသေးစိတ် ပြင်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေစေမဲ့ ကောင်လေးပါ .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးနဲ့ သုံးလို့ရအောင် အထဲမှာ Serial Key လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် .. Key ဘယ်လို ထည့်ရမယ် ဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပေးပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်6:58 AMWindows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ14 comments
By နေမင်းမောင်6:58 AMWindows ခွေများ19 comments
By နေမင်းမောင်6:24 AMအထွေထွေ9 comments
By နေမင်းမောင်5:03 AMဖြေရှင်းနည်းများ15 comments
By နေမင်းမောင်4:43 AMWallpapers3 comments
By နေမင်းမောင်5:59 AMPhoto and Video Editor Tools13 comments
ကျွန်တော်အခု Photo DVD Maker လေးတစ်ခု ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. မိမိတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကို ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ Slide Show လေးတွေ ပြုလုပ်ပြီး DVD ပြန်ထုတ်ချင်တဲ့ အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက် အခုကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ Photo.DVD.Maker လေးက အထောက်အကူ ပြုမယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. အထဲမှာ မိမိတို့ သုံးချင်တဲ့ Effect လေးတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုပြီး ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးအသုံးပြုလို့ ရအောင် Keygen လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် .. Keygn လေးကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ် ဆိုတာကိုတော့ အော်ကမှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ မိမိတို့ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ချ သွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်5:42 AMSystem Tools16 comments
Uniblue PowerSuite 2012 Update လေးထပ် ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. အများစုလည်း အသုံးပြုဖူး ကြလ်ိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. Uniblue ကထုတ်တဲ့ Registry Booster , SpeedUpMyPC နဲ့ Driver Scanner သုံးမျိုးလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းထည်း သုံးလို့ရအောင် ထုတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးနဲ့ သုံးလို့ရအောင် Key လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် .. Key ဘယ်လို ထည့်ရမယ် ဆိုတာကိုတော့ သက်သက် မရေးပေးတော့ပါဘူး .. အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက် တက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. လိုအပ်လို့ အသုံးပြုချင်သူ များကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်5:28 AMISO and Burning Tools4 comments
ကျွန်တော် Nero_8.3.20.0 ကို Full Version လေးသုံးလို့ရအောင် Key Maker လေးနဲ့ ရှာပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ် ။။ Nero ကိုတော့ အများစု အသုံးများကြသလို ဒီကောင်လေးတစ်ခုထဲကနေ Feature တွေ အများကြီး အသုံးပြုနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကိုလည်း အထောက်အကူ ပြုစေပါတယ် .. ကျွန်တော် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Nero_8.3.20.0 မှာ Burning Room , Cover Designer , Nero Express အစရှိသဖြင့် Function တော်တော်စုံစုံ လင်လင်ပါဝင်ပါတယ် .. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 228 MB လောက်ရှိပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒေါင်းလော့ ချရတာ အဆင်ပြေအောင် သုံးပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် .. အောက်မှာ မိမိတို့ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်4:54 AMSkin Packs5 comments
ကျွန်တော် အခု Skin Pack လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. Xbox Skin Pack လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးက ကျွန်တော်တို့ Theme တွေသုံးသလို မိမိတို့လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ Windows Screen ပုံစံလေးပဲ ချိန်းသွားမှာ မဟုတ်ပဲ Windows Screen Logo တက်တာတွေ Shutdown ကျတဲ့ ပုံစံလေးတွေပါ ချိန်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. စမ်းသုံးကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ .. တကယ်လို့ မိမိတို့က အသုံးမပြုချင်လို့ ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Control Panel ထဲက Program and Features ထဲက Xbox Skin Pack ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို ပြန်ရှာပြီး ဖြုတ်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ .. ဒါဆိုရင် မူရင်းပုံစံ အတိုင်း ပြန်သုံးလို့ ရသွားပါလိမ့်မယ် ..ကျွန်တော် အောက်မှာ 32 Bits နဲ့ 64 Bits နှစ်မျိုးလုံး တင်ပေးထားပါတယ် .. မိမိတို့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ Windows အမျိုးအစားကို ရွေးပြီး ဒေါင်းလော့ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်6:05 AMInternet Tools41 comments
By နေမင်းမောင်6:05 AMအထွေထွေ5 comments
ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက် ဂျာနယ်ကို မျော်လင့်နေတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီလထုတ် အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ ( ၁၃ ) ၊ အမှတ် ( ၈ ) ကို Myanmar Free Zone ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်လေးမှာ တင်ထားတာ တွေ့တာနဲ့ တောင်းထားတဲ့ အကိုတွေ လည်းရှိလို့ ပြန်ရှယ် ပေးလိုက် ပါတယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ သုံးနေရာ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် .. အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ချသွားလိုက်ပါ .
By နေမင်းမောင်5:58 AMAntivirus Softwares14 comments
By နေမင်းမောင်3:29 PMPhoto and Video Editor Tools16 comments
ကျွန်တော် အစကတော့ ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုနည်း ရေးမယ်လို့ စဉ်းစား ထားတာ .. အချိန်လည်း မပေးနိုင်တော့ တာကြောင့် မရေးပေး ဖြစ်တော့ပါဘူး .. DVD Slide Show ပြုလုပ်ချင်သူတွေ အတွက်တော့ ဒီကောင်လေးက တော်တော် အသုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း အရမ်းမကြီးပဲ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ဒီဇိုင်း ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖန်တီး နိုင်မှာ ဖြစ်သလို Effect တွေကိုလည်း လန်းလန်းလေးတွေ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. Zawgyi-One လည်း သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ် .. မြန်မာဖောင့် ကောင်းကောင်း သုံးလို့ရပါတယ် .. U-Lead သုံးရတာထက် ဒီကောင်လေးက လွယ်လည်းလွယ်သလို .. ပိုပြီးတော့လည်း အဆင်ပြေပါတယ် .. ဓာတ်ပုံ DVD Slideshow လေးတွေကို လန်လန်းလေး ဖန်တီးချင်သူတွေ အတွက်တော့ အထူးဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကောင်လေးပါ .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးနဲ့ သုံးလို့ရအောင် အထဲမှာ Keygen လေးပါ ထည့်ပေး ထားပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်2:04 PMMyanmar E-Books8 comments
မေးလ်ထဲမှာ အကိုတစ်ယောက် တောင်းထားတာလေး ရှိလို့ တစ်ခြား လိုအပ်တဲ့ သူတွေ ရှိရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. Microsoft Excel 2010 ကို အသုံးပြုချင်သူတွေ အတွက် Excel 2010 အသုံးပြုနည်း စာအုပ်လေးပါ .. ကျွန်တော် အောက်မှာ သုံးနေရာ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် .. မိမိတို့ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်12:12 PMWindows ခွေများ12 comments
By နေမင်းမောင်3:40 AMGraphic and Design8 comments
By နေမင်းမောင်3:18 AMPhoto and Image Tools4 comments
Poto Skape ကိုတော့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ရုပ်ပြောင်လေးတွေ အဖြစ်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပုံလေးတွေကို ကလိရတာ ၀ါသနာ ပါတဲ့ သူတော်တော် များများတော့ သိပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော် အရင်ကလည်း တင်ပေးဖူးထားတာ ရှိပါတယ် . ဒီကောင်လေးက Free အသုံးပြု ယုံပါပဲ .. အခုကျွန်တော် နောက်ထပ် ဗာရှင်း အသစ်လေး ထပ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် ထပ်တင် ပေးလိုက်တာပါ .. အသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
By နေမင်းမောင်3:08 AMPhoto and Image Tools5 comments
By နေမင်းမောင်2:32 PMAndriod နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ59 comments
By နေမင်းမောင်4:37 PMG-Mail and G-talk အကြောင်း40 comments